Costa Dorada - Ihe ị ga-ahụ na ihe ị ga-eme na ezumike ọzọ | Akụkọ Njem
Susana godoy | 08/04/2021 11:03 | Ebe njegharị
Ọ ga-amasị gị ịme ije dị ukwuu na Costa Dorada? Ọ bụ otu n'ime ebe kachasị mara amara nke ọdịdị ala Spanish na otu n'ime ihe ndị kachasị mma. Ọ dị na ndịda ọdịda anyanwụ nke Barcelona ma nwee osimiri na-enweghị njedebe yana ebe ntụrụndụ na-eme ka ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ karị, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume.
Ma ọ bụ eziokwu na Mpaghara a kariri oke osimiri ma ya mere, uzo omenala, juputara na akuko na obuna ndi ozo, na-adikwa banyere ya. Ya mere, ị gaghị echefu ihe niile ị nwere ike ịga na yana ihe ị nwere ike ime na ezumike gị. Ga-enwe ya niile na mkpịsị aka gị! Yoù dịla njikere ịnụ ụtọ ya?
1 Tarragona, otu n’ime ihe mmalite dị mkpa na Costa Dorada
2 A ije n'akụkụ osimiri ya
3 Ebe Ndabere Ma ọ bụ Ntụrụndụ?
4 Nleta na ogige ntụrụndụ Salou
5 Ndụ Gaudí na Reus
6 Anyị na-aga na Cistercian Nsoro!
7 Na-agagharị na Ebro Delta
Tarragona, otu n’ime ihe mmalite dị mkpa na Costa Dorada
Enwere ọtụtụ mpaghara ndị Costa Dorada kpuchiri, mana enweghị obi abụọ, Tarragona na-ebute ụzọ. Anyị nwere ike ikwu banyere ya na Ọ dị ka ụlọ ngosi ihe nka emepere emepe, maka ihe niile o nwere iji gosi anyị ebe akpọrọ mkpọmkpọ ebe nke Tarraco. Anyị ga-eme ihe ole na ole n'oge iji chọpụta afara, ụlọ elu dị ka nke Scipios na ọbụna mgbidi ochie ya, nke na-adịghị alaghachi n'oge Rom. Ihe niile a bụ otu n'ime ebe ndị ọkà mmụta ihe ochie kachasị mkpa, nke nwere ezigbo ihe, nke kwesịrị ịma. Na mgbakwunye na nke a, ị gaghị echefu nleta gị na Katidral nke Santa Tecla, na Mirador del Mediterráneo ma ọ bụ Port.
A ije n'akụkụ osimiri ya
Anyị si na ime njem gaa na oge ịlaghachi ugbu a wee chọpụta osimiri niile. Maka na ọ bụ mpaghara ebe aja aja ga - adị mgbe niile, jikọtara ya na mmiri ndị ahụ mara mma nke ha hụrụ n'anya nke ukwuu. La Pineda bụ otu n’ime osimiri zuru oke, ihe karịrị kilomita abụọ n’ogologo ebe ị nwere ike ịmegharị sọọfụ ma ọ bụ mmiri mmiri. Cala Fonda, nke a makwaara dị ka Waikiki, dị n’ebe ugwu nke Tarragona ma bụrụ otu n’ime ebe dị jụụ. Mgbe Playa de Santes Creus, ebe echiche ya na ngosipụta nke oke osimiri, ga-amasị gị. Otu ụbọchị, gị na ezinụlọ ya na ọhịa pine gbara ya gburugburu bụ Cap Roig Beach.
Ebe Ndabere Ma ọ bụ Ntụrụndụ?
Oge ụfọdụ njem na-ebido site na ebe obibi anyị lebara anya. N'ihi na ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka osimiri ndị mejupụtara ebe a, ebe ntụrụndụ, n'ụzọ zuru ezu, ga-abụ ndị protagonists. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọọ maka ihe akụ na ụba, nke bara uru yana maka ezinụlọ dum, ị nwekwara ike ịhọrọ a Maa ụlọikwuu Costa Dorada. N'ụzọ dị otu a, ị ga-anọrịrị na ebe dị jụụ ma n'ezie, ị nwere ike ịnụ ụtọ ime obodo na ụsọ mmiri mgbe ọ masịrị gị na ọrụ niile dị n'aka.
Nleta na ogige ntụrụndụ Salou
N'ihi na mgbakwunye na osimiri na otutu njem, Salou nwekwara Ogige ntụrụndụ PortAventura World. Ya mere, ọ nwere ike ịbụ nke ọzọ karịa karịa nleta nleta, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị soro ụmụ gị. Maka n'ụzọ dị otú a ị nwere ike ịnụ ụtọ ebe nkiri niile dị ka ezinụlọ yana maka ha ọ ga-abụ ihe na-akpali akpali. N'ezie, Salou na-enyekwa gị ebe ndị pụrụ iche dịka ebe ewusiri ike Torre Vella, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnụ ụtọ akụkụ ọdịbendị kachasị ebe ahụ.
Ndụ Gaudí na Reus
Can gaghị enwe ike ileghara njem site na Reus, dịka ọ bụ ebe obibi nke Gaudí na ihe nile nke ruru. Kemgbe ọtụtụ afọ ọ bi na mpaghara a ma taa ọ bụ nnukwu ncheta nke onye na-ese ihe, n'akụkụ nke ọ bụla. Can nwere ike ịnụ ụtọ ihe bụ ụlọ ya yana Gaudí Center, nke bụ ebe ntụgharị okwu dị na Plaza del Ayuntamiento. N'ime ya, ị nwere ike ịchọta ihe onwe onye nke onye na-ese ihe na kwa, enwere ụlọ nwere mmeputakwa nke ọrụ ya.
Anyị na-aga na Cistercian Nsoro!
Ọ bụ ụzọ ị ga - esi jiri ụkwụ ma ọ bụ ịnyịnya igwe mee ma ọ bụrụ na ọ masị gị karịa. N'ime ụzọ a ị nwere ebe a na-akwụ ụgwọ atọ bụ ebe obibi ndị mọnk atọ: Vallbona, Poblet na Santes Creus. A karịa zuru oke ebe iji chọpụta akụnụba ya nke ụlọ, nke doro anya, kamakwa na gastronomy na n'ezie, na nka. N'ihi ya, ọ bụ nhọrọ ndị ọzọ na mgbe anyị gara Costa Dorada, anyị na-agagharị.
Na-agagharị na Ebro Delta
Ga na ogige Delta del Ebro bụ ihe ọzọ dị mkpa ịtụle. Ebe ọ bụ n’ime ya ka ị ga - achọpụta ọtụtụ ụdị anụmanụ. Ma na mgbakwunye, ọ na-enye gị ihe ọ ofụ ndị ọzọ na-enye obi ụtọ ị nwere ike ịnụ ụtọ ma cheta maka ndụ gị niile: njem ụgbọ mmiri site na Ebro Delta. Ọfọn, ị nwere ike ịnweta ọnụ nke otu n'ime osimiri ndị kachasị mkpa, na-anụ ụtọ okike na osimiri ya. Have nwere ụzọ gasị ndị dị ihe dị ka otu elekere, ihe ruru otu ụbọchị. Kedu mpaghara ị ga-amalite ezumike gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Ebe njegharị » Ije ije na Costa Dorada: Ihe ị ga-ahụ na ihe ị ga-eme